U gaar Ah Dumarka:Qodobadaan Raac Waad Ku Guuleysaneysa Nolosha Qoyska | shumis.net
Home » galmada » U gaar Ah Dumarka:Qodobadaan Raac Waad Ku Guuleysaneysa Nolosha Qoyska
WAXAAN RABAA IN AAN HALAKAN KU SOO KOBO MAQAALKAAN ,OO AAN ISLEEYAHAY WAX BADAN AYUU KA TARAYAA NOOLSHA HAWEENKA SOOMAALIYEED,IYO HORMARINTA QOYSKA ,WAAYO HAWEEN BADAN AYAA KU FASHILMAY ,ARINKA GURIGA IYO NOOLASHA QAALIGA AH EE GUURKA ,WUXUUNA KA KOOBANYAHAY 50 QODOB:-
1-in qaadato awaamirta ilaahi iyo waajibaadka alle saaray,iy daacada rasuulka scw.
2- in aysan ka bixin guriga ninkeeda uu aan u idmin.
3-in ay ahaato mid u dhoola cadysa ninkeeda.
4-markay wax waydiisanaysa ninkeeda waa in ay doorataa waqtiga ku haboon,adeegsataana kalmada wanaagsan oo soo jiida ninkeeda.
5-in ay tahay mid ku sifowday akhlaaq wanaag.
6-in ay tahay mid ku sabarta haduu ninkeeda sabool yahay,kana mahad celisa haduu yahay ninkeeda hantiile.
7-in ay tahay mid jecel khayrka oo faafisa wanaaga.
8-in ay tahay runley oo ay ka fogtahay beenta.
9-in ay tahay mid ku barbaarisa ilmaheeda ,tarbiyada islaamka,bartana caruurteeda ixtiraamka aabahood iyo dadka waa wayn.
10-in ay tahay mid ka fog carada iyo xanaaqa faraha badan.
11-in ay tahay mid tawaaduc badan oo ka fog kibir iyo istus tus iyo faan.
12-in ay tahay mid la timaada cibaadada alle ku fardyeelay.
13-in ay tahay mid alle xusta hadi iyo jeer oo carabkeeda uu ka qoyanyahay xuska ilaahay.
14-in ay ka dalbataa ninkeeda waxa uu awoodo ,oo aysan saarin culays uusan awoodin.
15-in aysan ku kadsoomin quruxdeeda,dhalinyara nimadeeda,iyo aqoonteeda,oo ay ogaataa in waxaa soo dhan ay tagayaan.
33-haduu ninkeeda fiiriyo waa in uu ku farxaa. %$&*%^tbtgh&y^RFD
50-waa in ay tahay mid og in uu ninka yahay caruur saan wayn ,o u baahanyahay koolkoolin iyo sasabid fara badan.
Intaas waxaan ku soo koobay shuruudaha haweenayda ku guulaysatay noolasheeda,
MG:hadaba manta dumarkeena ma leeyihiin shuruudahaas ,mase ka firkteen gabdhow in aad higsataan shuruudahaas ,si aad u noqotaan kuwa ku guulaystay noolasha,gabdho badana ,waxay ku guuldaraysteen noolashaas.
Title: U gaar Ah Dumarka:Qodobadaan Raac Waad Ku Guuleysaneysa Nolosha Qoyska